Gwema Ukuthunjwa Ngama-ejensi | Martech Zone
Gwema Ukubanjwa Ngokubanjwa Ama-ejensi
ULwesihlanu, February 5, 2016 ULwesihlanu, February 5, 2016 Douglas Karr
Ukuba ngumnikazi wami kuye kwavula amehlo ekutheni kwenziwa kanjani ibhizinisi… futhi akukuhle. Angifuni ukuthi lokhu okuthunyelwe kube yi-ejensi yokushaya okuthunyelwe ngoba ngizwelana nama-ejensi amaningi nezinqumo ezinzima okufanele bazenze. Lapho ngiqala, nganginombono wokuthi ngangingafuni ukuba yikho ukuthi i-ejensi - enye yalezo zinhlangano eziteketisa futhi zifiphaze amaklayenti, iphushela ukuwathengisa nsuku zonke, ilayishe futhi ishintshe, noma ikhokhise imali ethe xaxa lapho igcina khona.
Sibe nenkontileka evuleke kakhulu eyenza amaklayenti akwazi ukuhamba lapho ethanda, kepha kubuyela emuva nakithi - kaningi. Esikhundleni sokuthi isetshenziswe njengendawo lapho izinto bezingasebenzi khona, sinamakhasimende amaningana abhalise ngaphansi kohlelo lwethu lwamanani aphansi, asunduzele ngonya ukuthola umsebenzi omningi kunalokho ebesikuthembisile, bese siyeke ukugwema ukuwukhokhela phansi komgwaqo. Lokho kusibizela isikhathi nemali eningi.
Lokho kusho, sisazonda ukuthola ama-imeyili afana nalawa:
Lokhu kudala izinkinga ezimbili ezinkulu. Okokuqala, iklayenti manje liphelelwe yimali futhi lithembele kwi-ejensi abasebenzise isabelomali sabo nayo. Okwesibili, iklayenti manje liphatheke kabi nge-ejensi, futhi namathuba okujika kwezinto awalungile. Lokho kusho ukuthi kungadingeka ukuthi bahambe baqale phansi. Inqubo ebizayo abangakwazi ukuyikhokhela.
Ngokuya ngenkontileka ne-ejensi, i-ejensi nayo ingaba okulungile. Mhlawumbe i-ejensi ifaka umzamo omkhulu ebukhoneni bewebhu futhi isebenza kwinkontileka lapho iklayenti likhokha khona kuhlelo lokufaka isitolimende. Isiza singathatha isikhashana ukukala kahle (yize ngimangele umxhumanisi we-SEO ezothatha amaklayenti ancintisanayo). Kungenzeka kungabi isimo sokuthunjwa nakancane.
Uma ucabanga ukuthi i-ejensi ayilungile noma ngabe yini, ungahle uthande ukubheka izinkontileka zakho. Njengesibonelo, uma sikhiphela ngaphandle i-animation ku-ejensi, mhlawumbe sizobuyisa ividiyo ekhiphayo. Ama-ejensi amaningi awahlinzeki ngamafayela we-After Effects aluhlaza ngaphandle uma lokho kuyingxenye yesivumelwano. Uma ufuna ukuhlela ku-animation, mhlawumbe kuzodingeka ubuyele emuva ku-ejensi yomthombo bese uthola enye inkontileka endaweni.
Ungazigwema Kanjani Izimo Zokubanjelwa Abenzeli
Ekumakethweni kwedijithali, singakuncoma ukuthi uhlale ungena ebudlelwaneni ne-ejensi yakho wazi okulandelayo:
Igama lesizinda - ngubani ophethe igama lesizinda? Ungamangala ukuthi mangaki ama-ejensi abhalisela igama lesizinda leklayenti, bese uligcina. Ngaso sonke isikhathi senza amaklayenti ethu abhalise futhi abe ngabanini besizinda.
Hosting - uma unqamula ubuhlobo ne-ejensi yakho, ingabe udinga ukuhambisa isiza sakho komunye umphathi noma ungahlala nabo? Sivame ukuthenga ukubanjelwa kwamakhasimende ethu, kepha kuhlala kusegama labo ngakho-ke uma besishiya, bangavele basuse ukufinyelela kwethu.
Izimpahla Ezingavuthiwe - Amafayili wokuklama afana ne-Photoshop, i-Illustrator, i-After Effects, i-Code nezinye izinsiza ezisetshenziselwa ukuthuthukisa eminye imiphumela yemidiya imvamisa iyimpahla ye-ejensi ngaphandle kokuthi uxoxisane ngenye indlela. Lapho senza i-infographics, isibonelo, sibuyisela amafayela e-Illustrator ukuze amaklayenti ethu akwazi ukuwabeka kabusha futhi akhulise inani lawo. Uzomangala ukuthi bangaki abangakwenzi lokho.
Thenga uqhathanisa Ukuqashisa
Konke kuya ngokuthi uthenga futhi unamalungelo akho konke okwenziwa yi-ejensi yakho, noma uma egcina amanye amalungelo emsebenzini abawenzayo. Thina njalo kwenze kucace lokhu namakhasimende ethu. Senze izixazululo ezimbalwa namakhasimende lapho sigcine khona izindleko ziphansi ngokuxoxisana ngenkontileka lapho singabanikazi bezimpahla khona. Lokho kusho ukuthi singazisebenzisela amanye amaklayenti uma sifuna. Isibonelo yi- indawo yesitolo sakha eminyakeni edlule sisebenzisa iGoogle Maps.
Ukukhuluma ngokomthetho kungaba nzima ukukufunda ngaphakathi kwesivumelwano esezingeni elifanele ngakho-ke qiniseka ukuthi uyazi. Indlela elula ukubuza nje:
Kwenzekani uma siqeda ubudlelwane bethu bebhizinisi? Ngingumnikazi noma ungumnikazi wakho?
Uma sidinga ukuhlelwa ngemuva kokuqeda ubudlelwane bethu bebhizinisi, lokho kuzokwenzeka kanjani?
Angikuphushi nakule ndatshana ukuthi kufanele njalo baxoxisane ngobunikazi phezu kwe-ejensi. Imvamisa, ungathola amanani entengo ancintisanayo kuma-ejensi ngoba asevele enze isisekelo futhi anezimpahla namathuluzi wokufeza imisebenzi. Lokhu kungaphezulu kwe- ukuqasha or isitolimende isivumelwano futhi kungakusiza uma ufisa ukonga imali.
Isibonelo, singathenga isiza esigcwele nayo yonke imidiya ngama- $ 60k kodwa sixoxisane nge- $ 5k ngenyanga. Ikhasimende liyazuza ngokuthola isiza ngokushesha ngaphandle kokukhokha yonke imali ngaphambili. Kepha i-ejensi iyazuza ngoba njengoba unyaka uqhubeka, banokutholwa kwemali okungaguquguquki. Uma iklayenti lithatha isinqumo sokunqamula inkontileka ibe mfushane futhi isebenze ngokuzenzakalela, ingalahlekelwa nayimpahla kanye nayo. Noma mhlawumbe bangaxoxisana ngenkokhelo yesamba ukuze bathenge izimpahla.
Sisebenza nabameli bethu manje ekuchazeni kangcono lokhu kunikelwa kwamakhasimende. Singanikela ngezinkontileka ezintathu ezihlukene, kufaka phakathi ukubonisana okumsulwa ngaphandle kwempahla, ukwenziwa lapho sigcina amalungelo omsebenzi ngezinga eliphansi, nokwenza lapho amaklayenti ethu egcina amalungelo omsebenzi ngezinga eliphakeme.
Ngale ndlela, izinkampani ezikholelwa ukuthi singabiza kakhulu zingasebenza nathi ngezinga eliphansi… kepha uma siphumelela, futhi bafisa siqu amalungelo okusebenza, bazodinga ukuxoxisana ngalokho kuthenga kithi. Noma bangavele bahambe, bese sigcina umsebenzi ukuze sikwazi ukuwubuyisela kwelinye iklayenti.
Tags: agencyinkontileka ye-ejensiizinkontileka ze-ejensiizingxoxo ze-ejensiisivumelwanoukuthunjwa